नेपाल र कुवेत आज भिड्दै – Khel Dainik
काठमाडौं (खेलदैनिक) । अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचतर्फ आज नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले कुवेतको सामना गर्दैछ । अल–शबाब स्पोर्टस् स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार ९:१५ मा हुन गईरहेको आजको खेल दुवै टोलीले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
कुवेत विरुद्ध नेपालले दुई मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्ने तय भईसकेको छ । नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल २५ मार्चका दिन घरेलु टोली विरुद्ध खेल्नेछ । नेपालका प्रशिक्षक योहान कालीनको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच भएकाले उनले आजको जित्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको शुरुवात गर्न चाहेको बताईसकेका छन् ।
फिफा वरियतामा कुवेत १५८औं स्थानमा छ भने नेपाल १६१औं स्थानमा रहेको छ । कति होला त आजको नतिजा ? के नेपालले कुवेतलाई उसकै घरमा हराउन सक्ला त ?
← कुवेत विरुद्ध जितका साथ करियरको शुरुवात गर्न चाहन्छु : कालीन आज कुवेत विरुद्ध भिड्ने नेपालको पहिलो रोजाईको टोली घोषणा →
पाराल्याम्पिकका लागि केल्मीको प्रायोजन चैत्र ७, २०७५
ट्राई सिरिजका लागि १९ खेलाडी (नामावली सहित) चैत्र ७, २०७५
फुटबल खेलाडी र अफिसियललाई खेलस्थल मै कोभिड विरुद्धको खोप ! चैत्र ७, २०७५
नेपाली क्रिकेटलाई अझै उचाईंमा पुर्याउने सपनासहित पारसको सन्यास चैत्र ७, २०७५
अल्मुतारीले माफी माग्दै भने “नेपाली फुटबललाई मेरो विशेष सम्मान” चैत्र ७, २०७५
एन्फा प्रवक्ता राईले दिए राजिनामा चैत्र ७, २०७५